ठगीका क्रियाकलाप बन्द गर्नुस्– प्रधानमन्त्री ओली
विदेशी लगानी ल्याउनेले आफ्नो पुँजी कालो धन नभएको पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्रीको चुनौती !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । उद्यमीका लागि सरकार सबै तरहले सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रमा हुने गरेका ‘ठगी क्रियाकलाप’ भने बन्द गर्नु पर्ने सर्त राखेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघको १६ औं वार्षिक साधारणसभा सभालाई सम्बोधन क्रममा प्रम ओलीले सरकार कानुनी जटिलतादेखि अफ्ठ्यारा नीति नियम र निर्देशिका पनि बदल्न तयार रहेको तर उद्योगी व्यवसायीहरु पनि सोही अनुसार बदलिन तयार रहेको छ कि छैन भनी प्रश्न पनि गरेका छन् ।
भरखरै सम्पन्न लगानी सम्मेलन पछि वैदेशिक लगानीमा स्वदेशी निजी क्षेत्र र सरकारी प्राथमिकता विभिन्न प्रश्न उठिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
उनको यो भनाइलाई लिएर केही दिन अघि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट चिनी उद्यमीको प्रपञ्चमा सरकार फसेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत फसाएको देखिएपछि स्वदेशी निजी क्षेत्र नै ठगी क्रियाकलामा संलग्न भएको भन्ने उनलाई लागिरहेको कतिपयले अनुमान लगाएका पनि छन् ।
उक्त कार्यक्रममा सोही कुरालाई संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी निजी क्षेत्रमा रहेका दुर्गुणहरु भण्डाफोर गर्न हिचकिचाएनन् ।
परिसंघको कार्यक्रम बन्यो स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको सम्मेलन !
केही दिन अघि मात्रै वैदेशिक लगानीकर्ताहरुको सम्मेलन गरेको सरकारले उद्योग परिसंघको साधारण सभालाई स्वदेशी लगानीकर्ताहरु बीचको सम्मेलनको अवसरकार रुपमा प्रयोग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री दुवैजना एउटै कार्यक्रममा आउनुलाई सरकारले दिएको महत्त्वका रुपमा हेरिएको छ । परिसंघको उक्त साधारण सभामा देशैभरका प्रतिष्ठित उद्योगी घरानाहरुको लगभग उपस्थिति थियो ।
वैदेशिक लगानीसँगै स्वदेशी लगानीकर्ताहरु पनि उत्साही हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । तर कतिपय अवस्थामा वैदेशिक लगानीका नाउँमा कालो धन नै घुमिफिरि नेपाल भित्रिएको भन्ने चर्चा चलिरहेकै अवस्थामा प्रम ओलीले वैदेशिक लगानी भित्राउनेले आफ्नो पुँजी कालो धन नभएको हुनु पर्ने पनि चुनौती दिएका छन् ।
उद्योगी विनोद चौधरी लगायत मुलुकका एकसे एक उद्यमीहरु एकै मञ्चमा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कालो धनलाई वैदेशिक पुँजीका नाउँमा भित्राउने कुरामा सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रम ओलीले आफुसंग भएको पैसा लगानी गर्न कुनै हिचकिचाहट नलिई पुँजी आर्जन गर्न पनि स्वदेशी पुँजीपतिहरुलाई हौस्याएका थिए ।
उनले अघि भने, ‘आफ्नो पुँजी लगानी गर्नुस्, मुनाफा लिनुस्, कमिसन पनि लिनुस तर, कर तिरेर व्यवसाय चलाउनुस् । मुलुक ठगिने गरी हुने धन्दालाई कुनै स्थान दिइने छैन !’
नेपालमा पर्यटन र कृषि दुवैमा लगानीको अथाह सम्भावना रहेको भन्दै प्रम ओलीले स्वदेशी पुँजीको लगानी अब त्यतातिर पनि हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अझै दुई तिहाई जनसंख्या अनावश्यक ढ्ङगमा कृषिमा अल्झिरहेको र त्यसबाट पार पाउन कृषिलाई व्यवसायीकरण बनाउन सरकार लागिपरिरहेको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाउँमा स्वदेशी पुँजीलाई नै अर्काे रुपमा प्रयोग हुने तर्फ प्रम ओलीले बढी नै समय खर्चेका थिए ।
उनले वैदेशिक लगानी ल्याउनेले आफूले ल्याएको रकम कालो धन नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती दिएका हुन् ।
प्रमले भने, ‘कसैले बाहिरबाट पैसा ल्याएर लगानी गर्छ भने अवश्य नै उसले यो पैसा स्वच्छ हो भनेर आफ्नो प्रतिबद्वता जाहेर गर्नु पर्छ, पुष्टि गर्नु पर्छ । सरकारले लगानी गरेर उद्यमशीलता बढाउने कुराको खुलेर स्वागत गर्छ ।’
नेपाल लगानीका लागि अनुकूल
प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री दुवै जना उपस्थित सो कार्यक्रममा प्रम ओलीले भने बारम्बार नेपाल लागनीका लागि अनुकूल रहेको दोहोराएका थिए ।
उनले व्यवसायीका लागि अनुकुल वातावरण रहेकाले लगानीका लागि अब नयाँ सम्भावना खोज्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
उद्योगका निम्ति उद्योगका आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा मेसिनरी वा प्रविधि भित्र्याउन पनि छुट दिन सरकार तयार रहेको समेत उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अब कसैलाई दोष लगाउने बेला नभई आफनो ठाँउबाट लिड गर्ने बेला आएको छ । काम गर्ने बेला आएको कुरा तपाईहरु जतिको लिडरसिपले बुझ्नु नै हुने छ । त्यसका लागि सरकार गम्भिरताका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।’